भोजराज कार्की, पुस २, सोलु एफ एम
सोलुखुम्बु ः जिल्लाको एक मात्र आयल स्टोर्स दुधकोशी आयल स्टोर्सले उपभोक्ता ठग्ने गरेको खुलासा भएको छ । आयल स्टोर्सले विभिन्न बाहानामा ठगी गरिरहेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल आयल निगमले १५ दिन अगाडीनै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा प्रतिलिटर रु.२। घटाएपनि यहाँ भने घटेको छैन । “उपभोक्ताले किन घटेन भनेर प्रश्न गर्दा धेरै अगाडी ढुवानी भएको हो त्यसैले घटाउन सकिएको छैन भन्ने त्याहाका कर्मचारीले जावाफ दिनेगरेका छन् ।” उपभोक्ता अनिल बस्नेतले बताउँनुभयो, “पम्प बाट पनि दिदैन जर्किनमा भरेको दिन्छ त्यो पनि पुरा हुदैन ।”
नेपाल आयल निगमको आधिकारीक निर्णय अनुसार पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य बृद्धि गरि लागु गरिएको समय देखी मुल्य बढ्ने र घटाउने निर्णय गरेको समयदेखीनै मुल्य घटाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि सोलुखुम्बुमा भने त्यो लागु भएको छैन । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाएको १५ दिननै वितेपनि मुल्य नघाटाउँदा यहाँका उपभोक्ताले बढी मुल्य तिर्नुपरेको गुनासो गर्छन् ।
ओखलढुंगा स्थीत बेन्जु आयल सप्लार्यसका सञ्चालक सरोज श्रेष्ठले आयल निगमको नियम तथा निर्णय अनुसारनै सबैले विक्रि वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सबैतीर पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य एउटै हुन्छ, त्यसमा ढुवानी भाडा जोड्ने हो अनी वितरण गर्ने हो, पछिल्लो समय ढुवानी भाडा बढेको छैन, केन्द्रले जे निर्णय गर्छ हामी त त्यही अनुसार काम गर्छौ ।”
ढुवानी समेत आयल निमगलेनै गर्ने जिम्मा लिएमा देशैभरिको मुल्य एउटै हुने श्रेष्ठको भनाई छ ।
४५ किलोमीटर दुरीमा प्रतिलिटर रु.१० नै बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता ।
नेपाल आयल निगमको डिपो कार्यालय बिराटनगर देखी ओखलढुंगा सम्मको ढुवानी भाडा भत्ता सहित प्रति ट्याङकर रु.८२ हजार रहेको छ । यस्तै सोलुखुम्बुका लागि प्रति ट्याङकर भत्ता सहित रु.१ लाख ५ हजार रहेको छ । यसरी हेर्दा ओखलढुंगाको भन्दा यहाँको ढुवानी भाडा रु.२३ हजार बढी हुन आउँछ । ओखलढुंगा देखी सोलुखुम्बुको दुरी करिब ४५ किलोमिटर हो ।
आयल निगमको नियम अनुसार ढुवानी गर्दा लाग्ने सम्पुर्ण खर्च जोडेर आयल सप्लायर्सले मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही नियम अनुसार ओखलढुंगामा डिजेल प्रतिलिटर रु.१०५.५०। पेट्रोल प्रतिलिटर रु.११३ रहेको छ । एक ट्याङ्करमा १२ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुन्छ । ओखलढुंगा देखी सोलुखुम्बुको ढुवानी भाडालाई हेर्दा रु.२ को मात्र फरक पर्छ । तर यहाँ पेट्रोलको मुल्य प्रतिलिटर रु.१३२ रहेको छ । दुई जिल्लाको मुल्यलाई हेर्दा रु.१२ फरक पर्छ ।
ढुवानी मुल्य मात्रै जोडेर वितरण गर्नुपर्ने नियम अनुसार यहाँका उपभोक्ताले प्रतिलिटर रु.१० बढी तिर्नुपरेको छ ।
नियमनकारी निकायको मौनता फाईदा, आयल स्टोर्सको मनपरी तन्त्र ।
यहाँका उपभोक्ताले बारम्बार चर्को मुल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेको भएपनि नियमनकारी नियकाले चासो नदिएको उपभोक्ताले गुनसो गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढी भएपनि सहज उपलब्ध गराउन नसकेको जिप चालक अनिल बस्नेले बताउँनुभयो ।
“जहिले पनि पम्पमा गयो, तेल छैन भन्छ ।” चालक बस्नेतले भन्नुभयो, “पम्प भन्दा बाहिर तेल पाउने तर पम्पमा नपाउने कस्तो बिडम्बना ? पम्पले नदिएपछि हामी बाहीर बजारमानै किन्नुपर्छ । त्यो पनि २० लिटर भनेकोमा १९ जति मात्र हुन्छ ।”
जिल्लामा एक मात्र आयल स्टोर्स भएपछि यहाँका उपभोक्ताले बढी सास्ती खेप्नुपरेको बताउँछन् । आयल स्टार्सले प्रशस्त डिजेल उपलब्ध गराउन नसक्दा गाडी भाडा समेत महङ्गो हुनेगरेको जीप चालक तुलबहादुर बिश्वकर्माले बताउँनुभयो । “बाहीर महङ्गोमा तेल किनेर गाडी चलाउनुपर्छ ।” विश्वकर्माले भन्नुभयो, “गाडी भाडा महङ्गो भयो चाही भन्छन्, तेलचाही कत्तिको सहज पाईन्छ भनेर कसैले चासो दिदैनन् । ”
अधिकार संस्थालाई जिम्मा व्यक्तिलाई ।
दुधकोशी पर्यटन सहकारी संस्थाले आधिकारीक रुपमा जिल्लामा दुधकोशी आयल स्टोर्स सञ्चालनको लागि जिम्मेवारी पाएको छ । तर पनि उसले व्यक्तिलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ ।
सञ्चालनको जिम्मा पाएका स्थानीय पिके शेर्पाले ढुवानी गर्न गाह्रो हुनेभएकाले सहज पुर्ती गर्न नसकिएको बताउँनुहुन्छ । “आफुले कर्मचारीलाई तत्काल मुल्य घटाउनको लागि कर्मचारीलाई निर्देशन दिईसकेको थिए ।” शेर्पाले भन्नुभयो, “म बिरामी भएर उपचारमा काठमांडौ छु, त्याहा कर्मचारीले गर्दा समस्या आयो ।”
आफुले जर्किनमा भरेर दिने काम समेत नगर्न बारम्बार भनिरहेको शेर्पाको भनाई छ । “उपचारको लागि काठमांडौमा छु ।” शेर्पाले भन्नुभयो, “तत्काल फोन गरेर मूल्य घटाउन लगाउँछु । पुसको १५ देखी म आफै पम्प बसेर व्यवस्थीत गर्छु गुनासो आउन दिन्न ।”
तत्काल अनुगमन गरेर कार्वाही गर्छौ ः
सोलुखुम्बुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुक्ति शेर्पाले तत्काल अनुगमन गरि कार्वाही गरिने बताउँनुभयो । “बास्तबीक भएको के हो ? हाम्रो त्यसमा ध्यानकर्षण भएको छ ।” सहायक प्रजिअ शेर्पाले भन्नुभयो, “मुल्य तत्काल घाटाउन लगाउँछु, जर्किन बाट बेचेको चाही स्थलगत अनुगमन गरिहाल्छु ।”